अस्पताल लैजानु भन्दा पहिलै ओच्छ्यानमा दिदीले पिसाब गरेकी थिईन !! – News Nepali Dainik
अस्पताल लैजानु भन्दा पहिलै ओच्छ्यानमा दिदीले पिसाब गरेकी थिईन !!
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण ०३, २०७७ समय: ८:०४:४७
श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीलाई पिटेरै मारेको भन्ने समाचारको वास्तविकता खुल्न आएको छ । वास्तवमा श्रीमानले किन श्रीमतीलाई कुटेरै मारे त भन्ने कुरा छलफलमा आउँदा दाश्रो श्रीमतीलाइ बिहे गर्न नपाएको भन्ने आरोप यतिबेला मृतकका आफन्तले लगाएका छन् । माईती पक्षले त्यस्तो आ’रोप लगाउँदा घर तिरकाले भने बिरामी भएको हुनाले म’रेको भन्ने स्पष्टिकरण दिएका छन् । तर मृतकका आफन्त र माईति पक्षले त्यो कुरामा सहमति जनाएका छैनन् ।
मृतक बिरामी नै नभएको कुरालाई किन बिरामी भनिएको छ भन्दै मृतकका आफन्तहरु यस कुरालाई लिएर जवाफ खोजि रहेका छन् । यो घटनामा दुवै पक्षले एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाई रहंदा अहिले भने घटनाको नयाँ रुप बाहीरिएको छ । मृतकका आफन्तले आफ्नो चेलीलाई मार्नुको कारण ज्वाई भनिएका मृतकका श्रीमानले दोश्रो बिहे भएको दाबी गरेका छन् । उता मृतकका श्रीमानले भने यो कुरा स्वीकार्न मानेका छैनन् ।
उता मृतकको घर पट्टीको भनाईमा मृतक र उनका श्रीमानबीच राम्रो सम्बन्ध भएको भन्ने रहेको छ । श्रीमान श्रीमतीको यस्ता राम्रो सम्बन्ध थियो कि जुन सम्बन्धमा कुटपिटबाट घटना घट्नै सक्दैन भन्ने भनाई मृतकको घरपट्टीकाको भनाई रहेको छ । यस विषयमा मृतकका भतिजा पर्ने अमितले अन्टिलाई अन्तिम पटक आफुले समात्दा उहाँको शरिर तातै भएको बताएका छन् । मा’रेको भए उनको शरिर अस्पताल लैजाँदासम्म तातै नहुने उनको दाबी रहेको छ ।
तर माईती पट्टीको भनाई अनुसार मृतकका भाईले (दिदी) लाई अस्पताल लैजाँनु पुर्व ओच्छ्यानमा दिदीले पिसाब फेरेको बताएका छन् । त्यति मात्र नभई मृतकको शरिरै भरी नील डाम भएको पनि भाईले बताएका छन् । दुवै पक्षको भनाई बाझिंदा दुवै पक्षले नै कानूनको फैसला पर्खि रहेका छन् । यस विषयमा माईति पक्षले आफ्नो चेलीलाई मारेको भन्ने आरोप लगाएका छन् भने घर पक्षले आफुहरुले मारेको होईन भन्दै मृतकको सबैसंग सम्बन्ध राम्रो भएको बताई रहेका छन् ।
Last Updated on: February 15th, 2021 at 8:04 am
११११२ पटक हेरिएको